Barnaamijka Hogaaminta Suuban Oo Uu Sharaxayo Prof. Abdiraxman Axmed Nuur [Sulub] (PLTV)
Barnaamijka Hogaaminta Suuban Oo Uu Sharaxayo Prof. Abdiraxman Axmed Nuur [Sulub] (PLTV) July 14, 20143 Comments Aqoonyahan sare oo barre ka ah jaamacada Umul-Qura ee dalka Sacduudiga laguna magacaabo Prof. Abiraxman Axmed Noor ayaa deegaamada Puntland kawada barnaamijyo ku saabsan hogaaminta suuban.
Prof. Abdiraxmaan ayaa dhowaan qoray buug kusoo baxay luuqada afka ingiriisiga oo lagu magacaabo 56 LAWS OF LEADERSHIP.
xaamdi says	July 15, 2014 at 12:18 am	mansha allah
Osman Dahir says	July 15, 2014 at 4:00 am	Masha Allah Arimo fiican ayuu ka hadlay oo u baahan in laqaato dadkana lagu baraarujiyo
afguriye says	July 17, 2014 at 11:28 am	waa buug qiimoleh runtii inla keeno PL aad baanu udanaynayna insha,allaah barnaamijka hogaamintu wa barnaamij wanaagsan .waxaa jirey maqaal dheer oo uu horey aqoonyahan ree PL ah hogaaminta kaqoray .waana Abdihakim Yusuf Kheire, B.A., M.A. President Marka In Qoraalkaasna uu Prof C.Rixmaan qaybta Tvga umadda oga faaideeyo ayaan aad ujeclaan lahaa fadlan qoraalkaan Prof c.rixmaan email. halagu gaarsiiyo Taariikh hogaaminta
Cumar Bin Khadaab baa ugu sareeya hogaamiyayaasha caalamka. Cumar wuxuu ku hantay madashan sare cadaaladii uu xaqiijiyey in aduunyada laga fulin karo. Cadaaladu waa hadafka siyaasada. Mucaaridka & muxaafidkuba waxay ku hirdamaan tixgelinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka. Sirta siyaasaduna waa awooda fulinta ee cadaalada. Siyaasada caalamku waa mawjado carqalado ah oo haliga qawmiyadaha. Hogaamiyayaasha shaqadoodu waa samato bixinta bulshooyinkooda. Bulsho bilaa hogaamiye ahi waa bulsho fashilantay: bulshadii fashilantana caalamkaa fadhataysta. Sida dalalka Afghanistan, Somalia, Yemen and DR Congo.
Madaxda waxaa gardaadiya xaaladaha bulshooyinkoodu ku sugan yihiin & carqaladaha joogtada ah ee hirdamaya. Carqaladahan waxaa ka mid ah gumaysiga, diktatorshipyada, dagaalada sokeeye & halganka horumarinta dhaqaalaha. Madaxdan waxaana lagu carbiya kuliyadaha tobobarka ee ciidamada, caafimaadka & sharciga. Caalamiyan wali ingineer dalkiisa xornimo ma gaadhsiin: Halganka Falastiin waxaa khasaareeyey hogaanimadii Injineer Yaasir Caraffat (AHN). Maraykana madaxweynihii ugu talada xumaa wuxuu ahaa injineer: Herbert Hoover (1929-33) oo ku haftay xalintii dhaqaale burburkii ku habsaday dalka maraykanka. Farsamo yaqaanadu ma noqdaan madax fiican. Hogaaminta siyaasadu waxay ku salaysantahay fulinta falsafado cilmiyan hirdamaya. Farsamo yaqaanadana quluubtoodu uma carbisna kaydinta fikradahan.
Cilmiyan sadex qodob bay madaxnimadu ka farcamaan sida uu u qeexay Marx Weber (1864-1920) filosofer German ahi: Hogaamiye dhaqan (Traditional Leader), hogaamiye ruuxi (Charismatic Leader) & hogaamiye qaanuun (Ration-Legal Leader). Hogaamiye dhaqan astaan waxaa u ah caado soo jireen ah oo ixtiraam mudan oo rabitaan shacbi talada maamuus ahaan ugu haysa: tusaale ahaan boqortooyada dalka ingiriiska. Ama salaadiinteenii soo jireenka ahayd. Sirta nidaamka hogaaminta noocan ahi waa koobnaanta awooda fulinta & gudoominta go’aamada waaxda fulinta. Hogaamiyaha ruuxiga ahi waa dhacdo dhif ah oo sababta kacaan is bedel siyaasadeed oo ku salaysan qalibana nidaamkii hore. Waa shakhsiyaad quluubta shacabkooda kasbada mahlikadna u badheedha. Taarikhiyan Lenin, Ayatulaahi Ruuxulaahi Khumayni & Ghandi baa tusaale u ah. Shakhsiyaadkani waxay rideen nidaamo rajci ah oo ragaadiyey nolosha aadamaha sida boqortooyo hanti goosad ku salaysan (Russia); cilmaaniyad dictator dadka ku khasbay (Iran) & isticmaar cunsuriyad ku salaysan (India). Badanaa labadan nooc ee hogaamiye waa marxalada horseedka dalalkooda waxayna curiyaan nidaam siyaasadeed oo dhaxal gal ah.
Hogaamiye qaanuun: waa shakhsi kursi sugan oo awood cayiman leh dhaxla badana saamayna kuma yeeshaan nolosha dadkooda. Laakiin mawjadaha siyaasadu madaxdan waxay ku khasbaan hanashada waajibaadka distooriga ah. Taarikhiyan Madaxweynihii Maraykanka, Abraham Lincoln, ee doorashadiisu sababtay goosashadii goboladii cunsuriyada ee koonfurta baa tusaale u ah hogaamiye sandule ay ku noqotay is waafajinta waajibaadka distooriga ah & carqaladaha siyaasada ee kooxaysiga. Lincoln wuxuu fuliyey go’aan adoonsiga dadka madow mamnuucay oo kooxda gobolada beeralayda koonfurtuna muddo sodon sano ah ku hanjabayeen dhaqan-gelintiisu inuu ku khasbayo gooni isu-taag! Doorashii Lincoln waxay daliil u ahayd in Maraykan intiisa kale adoonsigu ceeb ku noqday damiirka dawladd xornimo & sinaan lagu unkay. Gooni isu-taagi koonfurtu wuxuu sababay rogmadkii lix boqol oo kun oo ruux dalka maraykankuna wuxuu is waafajiyey himiladii distoorka & noloshii waaqaca ahayd.
Madaxda waxaa lagu qiimeeyaa qodobadan soo socda: (1) Ka midho dhalinta hadafkooda; (2) is waafajinta himilada bulshadooda & waajibaadka siyaasada caalamka; (3) curinta nidaam siyaasadeed oo bulshadu ka dhaxasho. Madaxdu waxay si talan taali ahi u fuliyaan rabitaanka shacabkooda & waajibaadka dawladeed. Waajibaadka dawladeed waxaa ka mid ah midnimada qaranka, ilaalinta xoriyaadka aasaasiga ah, kobcinta dhaqaalaha & isku-dheeli-tirka awoodaha laamaha dawladda. Taariikhiyan Nelson Mandela baa dhamaan fuliyey qodobada kor ku xusan. Koonfur Afrika waa dalka qudha ee dadka madowi dadkii cadaa ka caqli wanaagsanaadeen: dimoqradiyad talada aqlabiyada ku salaysan. Cadaankii Koonfur Afrika dalkoodi kamay haajirine ee wali way ku dhaqan yihiin waana dalka Afrika ugu qanisan. Zimbabwina cadaankii u dhashay waxaa qaxiyey siyaasada hant-boobka ee Robert Mugabe dalkiina wuu burburay. Labada dal waxaa is-dhaafiyey madaxtinimada labada hogaamiye.
Madaxweynaha Dalka Shaqada Guusha
1 Nelson Mandela Koonfur Afrika Qareen Dib-u-heshiiseen
2 Mahathir Mohamed Malaysia Dokhtor Horumar Dhaqaale
3 Lee Kew Yew Singapore Qareen Casriyayn qaran
4 Pierre Elliot Trudeau Kanada Qareen Ansixin Distoor Midnimo Qaran ku salaysan
5 Fidel Castro Kuba Qareen Dhaqan gelinta Hanti-wadaaga
6 Hugo Chavez Venezeuala Kornayl Horumarinta nolosha danyarta
7 Meles Zenawi Ethiopia Dokhtor Horumarinta dhaqaalaha dalka
Lincoln, Mandela, Lenin, Khomeini & Gandhi dhamaan waxay ahaayeen qareeno. Caalamiyan madaxda ku xardhan taariikdhu waxay yihiin qareeno ama jeneralo. Dalalka Anglo saxonka (Ingriis, Maraykan, Kanada, Australia & New Zealand) madaxdoodu waxay u badan yihiin qareeno. Afrika & Carabtana waxaa rogmadka u horseeday saraakiil military oo afganbiya madaxweynayaashi gobinimada dhaliyey xukunkana qori caaradii ku qabsaday. Jeneralada taariikhda guusha ku sugan badanaa waa madax dalalkoodii xornimo & midnimo u horseeday aasaasayna nidaam dhaxal-galay xukunkana si maamuus leh uga degay. Jeneraladan waxaa ka mid ah: (1) George Washington oo xoreeyey Maraykanka diidayna in mar sadexaad madaxweyne loo caleemo saaro. (2) Simon Bolivar oo hindisay gobonimada & midnimada koonfur Amerika; (3) Joseph Tito oo isku yab-yabay dalkii Yugoslavia & (4) Kemal Ataturk oo aasaasay Jamhuuriyada Turkiga ka dib burburkii Imbaradoriyadii Cismaaniyiinta.
Dimoqradiyada & militarigu iskuma milmaan. Laakiin dalka Israel madaxdiisu badankoodu waxay yihiin saraakiil military & mukhaabaraad: Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Ehud Barak, Menachim Begin & Yitzhak Shamir. Lix milyan oo damcay inay sadex boqol oo milyan muquuniyaan dagaal yahano uun baa badbaadin kara!
Mudug Vs. Togdheer
Lixdii madaxweyne ee ugu horeeye dalka maraykanka afar waxay u dhasheen gobolka Virginia. Somalia & Somalilandna madaxda ugu badani waxay ku abtirsadaan goboladda Mudug & Togdheer! Tolow labadan gobol maxaa hodan kaga dhigay kobcinta madaxda?
La Soco.waxaa diyaariyey )Hogaaminta Siyaasada:(By) Abdihakim Yusuf Kheire, B.A., M.A. President
Shirar ka socda Bosaaso & Dadaalo looga soo horjeedo Ciidamada BIRMADKAWarmurtiyeed Mowqifka Dawladda Puntland ee mooshinka ka dhanka ah Baarlamaanka Maamul Goboleedka JubbalandDaawo Madaxweyne Gaas oo ka hadlay safarkiisa uu ku yimi Magaalada Boosaaso